OLEOYLETHANOLAMIDE (OEA) –Y TIA MAHAGAGA NY FIAINANAO
Home > Oleoylethanolamide (OEA) –Ny làlana mahagaga amin'ny fiainanao
Oleoylethanolamide (OEA) –Ny làlana mahagaga amin'ny fiainanao
Miaraka amin'ny olona lasa mahafantatra bebe kokoa ny tombontsoa azo avy Oleoylethanolamide (OEA), ny fangatahana Oleoylethanolamide (OEA) nitombo be ny famenony teny an-tsena. Izany dia nanjary nifaninana ireo orinasa mpamokatra mba hamokatra fanampin-tsakafo avo lenta hahazoana anjara amin'ny tsena. Raha mpanamboatra fanafody ara-pahasalamana mikasa ny hiditra ao amin'ny tsenan'ny famenon-tsakafo Oleoylethanolamide (OEA) ianao dia tokony ho azonao antoka fa mahazo ny vovo-tany Oleoylethanolamide (OEA) avo lenta indrindra ianao. Ny famoahana fitaovana tsara kalitao no dingana voalohany hiantohana ny fahombiazan'ny orinasa rehetra. Cofttek dia mpamatsy Oleoylethanolamide (OEA) matihanina izay tsy mivarotra afa-tsy vokatra mahomby ao amin'ity tsena ity mihoatra ny 10 taona.
Inona ny Oleoylethanolamide (OEA)?
Oleoylethanolamide dia amina teny telo: oleoyl, etanol ary amide. Ho an'ny fanamorana anay dia averinay any amin'ny OEA amin'ny teny fohy. Izy io koa dia fantatra amin'ny hoe oleothanolamine.
Izy io dia lipida etanolamide voajanahary izay miasa toy ny mpandrindra momba ny fomba fahanana sy ny lanjan'ny vatana amin'ny karazana vertebrata. Izy io dia metabolite misy asidra oliva izay niforona tao amin'ny tsinay kely amin'ny vatan'olombelona. Izy io dia mifamatotra amin'ny receptor PPAR Alpha izay manampy amin'ny fifehezana lafin-javatra efatra: hanoanana, tavy amin'ny vatana, kolesterola ary lanjany. PPAR Alpha dia midika hoe Alpha peroxism Proliferator-Activated Receptor Alpha.
Fampiasana Oleoylethanolamide (OEA)
Ny fampiasana ny OEA dia mihetsika amin'ny fomba tena stratejika. Voalohany, mampitombo ny elanelam-potoana eo anelanelan'ny sakafo iray ka hatramin'ny sakafo manaraka. Faharoa, manampy amin'ny fampihenana ny fiovan'ny toetr'andro izy io. Fahatelo, fehezin'ny otrikaina misy izy io.
Ny vokatry ny OEA sy ireo mpandray tombony aminy dia hita dimampolo taona lasa izay. Tsy nisy fikarohana lalina sy voarindra momba ny OEA talohan'ny taona 2001. Ny mpikaroka avy any Espana no nanomboka nandalina momba ny OEA, notsapaina tamin'ny voalavo mba hahitana ny vokany. Ny fandinihana dia nanambara fa ny OEA dia tsy misy fiatraikany ratsy amin'ny ati-doha fa afaka manova ny fahazarana misakafo ary misy fiatraikany amin'ny fitondran-tena noana.
Ny firafitry ny molekiola dia C2OH39NO2. Ny laharana CAS tokana dia 111-58-0. Ny OEA dia fitambaran'ny asidra oliva sy ny etanolamine. Eo ny fisian'ny tavy manankarena izay hita eo amin'ny tapany ambony amin'ny tsinay kely ao amin'ny vatantsika no toerana anaovan'ny ankamaroan'ireo singa roa ireo. Ny OEA dia tena mitovy ary mitovy amin'ny endocannabinoid anandamide fa tsara kokoa aza.
Ny fatran'ny oleoylethanolamide (oea)
Fatran'ny OEA azo raisina amin'ny fomba roa miorina amin'ny torohevitry ny dokotera:
Ny OEA dia naka nefa tsy nisy famenon-danja fanampiny
Raha ny kapsily OEA dia raisina tsy misy famenon-tsakafo mampihena ny lanjanao dia afaka mihinana kapsula OEA 1 amin'ny 200mg ianao.
OEA dia naka fanampin-tsakafo mampihena ny lanjany
Raha ny kapsily OEA dia raisina miaraka amina famenon-tsakafo mampihena ny lanjany dia azonao atao ny mihinana kapsily 1 OEA 100 mg ka hatramin'ny 150 mg.
Ny iray dia tsy maintsy mihinana ny kapsule OEA telopolo minitra alohan'ny hisakafoanana. Izany dia hahatonga anao ho voky bebe kokoa rehefa misakafo ianao ary amin'izany dia hihinana sakafo kely kokoa ianao.
Ankoatr'izay, azonao atao aza ny mampitombo na mampihena ny haavon'ny fatran'ny OEA isan'andro miankina amin'ny lanjan'ny vatanao. Eritrereto, ny olona iray milanja 150 lb dia mandray ny kapsily OEA 100mg. Fa raha milanja 250 pounds ny olona iray dia afaka mihinana ny kapsily OEA 180 mg izy.
Vidio vovoka Oleoylethanolamide (OEA) betsaka
Azonao atao ny mametraka kaody an-tserasera amin'ny fividianana vovoka betsaka na koa afaka mividy amin'ny fivarotana malaza eo an-toerana. Tsotra ny fitehirizana raha ny vovo-dronono OEA. Mila mitahiry azy amin'ny hafanan'ny efitrano ianao. Saingy, tsy tokony hifandray amin'ny hamandoana na ny tara-masoandro mivantana izy io. Noho izany, mila mitazona azy mafy amin'ny toerana mangatsiaka sy maina ianao.
Ny fampiasana OEA dia afaka manampy anao amin'ny lafiny maro! Noho io antony io, tena azo atoro ny rehetra satria tsy misy vokany izany. Mety hiteraka fomba fiaina salama ao anatin'ny fianakavianao izany ka hahatonga anao rehetra hitombo sy hamirapiratra amin'ny endriny, amin'ny fomba ary amin'ny fahatokisan-tena sy fahatokisana. Ny fitazonana sy fitazonana ny vatanao amin'ny endriny, indrindra ho an'ireo izay somary matavy loatra, dia tsy hahasambatra anao fotsiny fa hahatonga ny hafa ho faly sy hirehareha momba anao koa.
OEA koa dia hanampy anao hamoaka ny adin-tsaina manampy anao hamorona fahatsapana tsara ao an-tsain'ny hafa. Noho izany, raha tokony ho sosotra sy tsy faly ianao, dia fotoana tokony handraisana andraikitra ary hanomboka hampiasa OEA ary ho gaga ianao mahita ny herin'ny maizina ary hahatsapa ho sitrana sy ho voadoka ianao.
Ny fiasan'ny Oleoylethanolamide (oea)
OEA na Oleoylethanolamide dia fanafody manampy anao hifehy ny lanjany, ny fahazarana mihinana ary ny kolesterola. Izy io dia metabolite voajanahary. Izy io dia mifehy ny tavy amin'ny vatanao amin'ny alàlan'ny fampitomboana ny metabolisma ny tavy izay misy ao amin'ny vatanao. Izy io dia miasa amin'ny fomba tena mahaliana.
Rehefa mihinana sakafo ianao, ity zava-mahadomelina ity dia handefa famantarana any amin'ny ati-dohanao mangataka anao hitsahatra tsy hihinana na haka sakafo lavitra satria efa nihinana sakafo ampy ny vatanao ary tsy mila intsony. Amin'izay dia ho tsapanao fa voky ianao ary noho izany dia tsy mihinana intsony. Noho izany, mihena tsikelikely ny sakafonao isaky ny mandeha tsy tapaka. Araka izany, amin'ny fotoana maharitra, afaka hainao ny mampihena ny lanjany betsaka.
Soa azo avy amin'ny Oleoylethanolamide (OEA)
1.Mampihena ny haavon'ny ghrelin
Ny ghrelin dia hormonina hita ao amin'ny vatantsika izay mandrisika ny filantsika. Hita fa ny OEA dia manampy amin'ny fampihenana ny haavon'ny hormonina ao amin'ny vatantsika raha mitantana ity OEA ity.
2.Mampihena ny tavy amin'ny vatana amin'ny taha mitombo
Ity tsindrona ity dia hita fa tena mandaitra amin'ny fampihenana ny tavy amin'ny vatana ary koa amin'ny taha mitombo. Mampitombo ny vokatry ny metabolism ao amin'ny mitochondria. Izy io aza dia mampihena ny fihinanana sakafo amin'ny fomba mahomby ary mampitombo ny haavon'ny angovo amin'ny vatanao koa.
3.Mitazona ny peptide yy haavo ambany
Peptide YY dia hormonina mandrisika ny filan-tsika. Ny tsindrona OEA raha raisina dia hanampy amin'ny fampihenana sy hitazomana ny haavon'ny haavo Peptide YY ho ambany dia ambany.
4. Manampy amin'ny fifehezana ny fahazotoan-komana
Ny fandraisana ny tsindrona OEA dia hanampy amin'ny fifehezana ny fahazotoan-komana amin'ny fanafohezana ny haben'ny tavy ao amin'ny vatantsika. Manatsara ny fandoroana tavy mihangona ao amin'ny vatantsika aza izany. Toy ny sy rehefa mihinana sakafo ianao dia manomboka miasa ny OEA. Mampisondrotra ny haavon'ny fampiasa azy io ary miaraka amin'izay dia mampihena ny haavon'ny fiankinan-doha amin'ny alàlan'ny fandefasana famantarana any amin'ny atidoha ary mampahafantatra fa afa-po mihoa-pampana ianao ary tsy mila sakafo hohanina intsony.
5.Tsy misy vokany ratsy
Taorian'ny fandinihana ny OEA, dia nohazavaina fa tsy nisy olona niatrika fiatraikany mahery vaika aorian'ny fitantanana izany tao amin'ny vatana. Ny OEA dia asidra oleika izay raisina ho ampahany amin'ny sakafo mahasalama sy mahavelona anao.
6.Ny vokany tsara amin'ny fitaintainanana
Ny OEA dia misy fiantraikany tsara amin'ny fitaintainanana. Ny fihinanana OEA dia manampy amin'ny fitazonana ny sainao tsy hanana ahiahy ary manampy amin'ny fitazonana ireo aretina mikorontana.
7.Mampitombo ny hdl ao amin'ny vatana
Misy karazany roa ny kolesterola ao amin'ny vatantsika. Izy ireo dia- Cholesterol LDL sy Cholesterol HDL. Ny LDL no kolesterola ratsy ary ny HDL no kolesterola tsara. Ny fidirana amin'ny OEA dia manampy amin'ny fampihenana ny kolesterola LDL ary hampitombo ny HDL Cholesterol.
8.Aids amin'ny fananganana vatana
Ny fananganana ny vatanao amin'ny endrika sy ny rafitra mety ary ny fatra sahaza no iray amin'ireo lamaody farany eto amin'izao tontolo izao ankehitriny. Indrindra amin'ny indostrian'ny lamaody na fialamboly amin'ny vatan'ny endrika dia takiana mafy. Ny fandraisana ny OEA dia manampy amin'ny fananganana ny vatana satria mampihena ny tavy ao amin'ny vatanao.
Mpamatsy ara-nofo ny Oleoylethanolamide (OEA)
Afaka mividy zava-mahadomelina OEA amin'ny fivarotana zava-mahadomelina malaza sy manam-pahaizana izay eo akaikin'ny toeram-ponenanao na afaka mividy azy amin'ny alàlan'ny baiko an-tserasera. Saingy tsy maintsy mailo ny olona amin'io lafiny io satria mety tsy ho izy ireo mpamatsy an'io fanafody io.
Noho izany, zahao hatrany ny lazany sy ny fahaizan'ny fivarotana zava-mahadomelina an-tserasera ary ho an'izay, torohevitra hatrany ny hamaky ny antsipirian'ny fijerin'ny mpividy za-draharaha. Aza hadino ny momba ny fonosana ny vokatra toy ny hoe voaisy tombo-kase tsara izy na tsia mba hisorohana ny karazana fandotoana izay mety hiteraka olana mampidi-doza eo amin'ny sehatry ny fahasalamana.
Oleoylethanolamide (oea) amin'ny endrika vovoka
Ny OEA amin'ny toerana niaviany dia tsy hita amin'ny endrika takelaka na kapsula. Na izany aza, azonao atao mividy vovoka OEA betsakaeny an-tsena raha ilaina. Ity endrika vovoka ity dia ampidirina ao amin'ny vita vokatra amin'ny fibaikoana azy ho OEA 15% na asidra oliva OEA 50%. Ny drafitra an'ny Cima OEA dia voatazona eo anelanelan'ny 90% ka hatramin'ny 95% indrindra eo amin'ireo mpividy an'i Eropa sy Etazonia.
(1).Pi-Sunyer FX, Aronne LJ, Heshmati HM, Devin J, Rosenstock J. Ny vokatry ny rimonabant, mpanakanana mpitsabo mpanampy cannabinoid-1, amin'ny lanjan'ny lanjan'ny aretina sy ny kometometrika amin'ny marary be loatra na matavy loatra: RIO-Amerika Avaratra: fitsarana tsy voafehy mifehy. The Journal of the American Medical Association. 2006; 295 (7): 761-775.
(2).Giuseppe Astarita; Bryan C. Rourke; Johnnie B. Andersen; Jin Fu; Janet H. Kim; Albert F. Bennett; James W. Hicks & Daniele Piomelli (2005-12-22). "Fisondrotana taorian'ny fanetsehana oleoylethanolamine fanentanana amin'ny tsinay kely amin'ny python Burmese (Python molurus)". Am J Physiol Regul Integr Comp Physiol. 290 (5): R1407 – R1412.
(3) .Sarro-Ramirez A, Sanchez-Lopez D, Tejeda-Padron A, Frias C, Zaldivar-Rae J, Murillo-Rodriguez E. Molekiola ati-doha sy ny filan-dratsy: ny tranga oleoylethanolamide. Ireo mpiorina amin'ny rafi-pitabatabana afovoany amin'ny simia fanafody. 2013, 13 (1): 88-91.
(5).Anandamide vs cbd: iza no tsara kokoa amin'ny fahasalamanao? Izay rehetra tokony ho fantatrao momba azy ireo!
(6).Ny zavatra rehetra tokony ho fantatrao momba ny nikôtinamid riboside chloride.
(7).Fanampiny magnesium l-threonate: tombontsoa, ​​fatra, ary vokany hafa.
(8).Palmitoylethanolamide (pea): tombony, fatra, fampiasana, famenony.
(9).Tombontsoa lehibe 6 ho an'ny fahasalamana amin'ny famenon-tsakafo resveratrol.
(10).Tombony 5 be indrindra amin'ny fihinanana phosphatidylserine (ps).
(11).Tombony 5 ambony amin'ny fihinanana quinone pyrroloquinoline (pqq).
(12).Ny famenon-tsakafo nootropic tsara indrindra an'ny alpha gpc.
(13).Ny famenon-tsakafo tsara indrindra ho an'ny monotucleotide nicotinamide (nmn).
Ny fanadihadiana natao vao haingana dia nanamafy fa ny OEA dia mpanohitra ny TRVP1. Naseho fa ny OEA dia misy fiatraikany mahasoa amin'ny fahasalamana amin'ny alàlan'ny fitaomana ny fifehezana sakafo, ny lipid beta-oxidation, ny fihenan-danja amin'ny vatana ary ny fihenan'ny analgesic. Ny famotopotorana ny fomba fiasa dia nanambara fa ny OEA dia mampihetsika ny PPAR-alpha ary manentana ny nerveo vagal amin'ny alàlan'ny TRPV1 mpandray capsaicin. Ny fanadihadiana natao talohan'ny klinika dia nampiseho fa ny OEA dia mijanona ho mavitrika hatrany rehefa ampiasaina am-bava.
Vao haingana aho no nampiasa OEA (oleoylethanolamide) bebe kokoa izay agonist PPARa iray hafa, fa iray izay singa iray mahaliana ny voky. Ampiasaina amin'ny sakafo sy mampihena ny lanjany satria mpandoro tavy malemy izy io ary mahazaka hanina tsy mampientanentana. Mampalahelo fa safidy iray na iray hafa ho an'ny vokatra azo ampiharina.